Kupfuura kudiki ne OpenSuse 12.2 RC2 | Kubva kuLinux
Pfupi kupfuura kuburikidza OpenSuse 12.2 RC2
satan AG | | GNU / Linux
Ndanga ndiri mushandisi weDebian kwenguva yakati ikozvino, asi mavambo angu neGNU / LINUX akatanga neOpenSuse kumashure muna 2007. Kunyangwe ndichida Debian, handina kumbomira kutevera basa rinoitwa nevanhu. OpenSuse uye ndinofanira kutaura kuti nguva dzose zvakanaka kwazvo, ichichiita chakakomba, chakatsiga kugovera, asi nerunako rwakakodzera kuremekedzwa.
Ndakafunga zvino kuyedza yazvino vhezheni vhezheni muhupenyu mode kubva paFlash drive, kuyeuka nguva dzekare asi zvakare kuziva kana yakagovaniswa zvaive zvichiri izvo zvaakarangarira.
Ndakafunga nezve KDE nharaunda yandakatangira, kubvira OpenSuse Inoishandisa senzvimbo huru yekufungidzira kuti, pano zvese zvinofanirwa kunge zvakarongeka (uchifunga kuti iri vhezheni vhezheni, hongu). Pfungwa yekutanga yandaifarira yaive yekupwanya iyo ine nyanzvi yekupedzisa: yakakomba, isina yakawanda recharge iripi girini uye zita rekugovera.
Iyo desktop inongori yakakwana, iine mutambo wakasarudzika wemavara apo chimiro che KDE chinogona kusimbiswa senzvimbo inokwezva kune ziso iro, rakawedzerwa mukubatanidzwa uye nebasa re OpenSuse inoita mhedzisiro inofadza. Izvi zvinodzokororwa mune rese ruzivo rweDistro: Mutambo wakapusa wemavara uye KDE pazvakanyanya.
Ipapo, ndakaenda kuburikidza neDolphin ndikatanga kuvhura mamwe mafomu uye mhedzisiro yacho yaive yakanaka, mhinduro dzakanaka kwazvo kubva kuPC, sarudzo yakanaka yekushandisa inoita chaizvo "akaitwa kufamba" kamwechete. Iko kushandiswa kwe RAM muhupenyu hakupfuure mazana manomwe emamagabyte kunyangwe neFirefox, Dolphin, Gwenview uye zviitiko zvinogara zviri "zvakatsetseka" zvachose, hapana kuderera uye zvinoita kunge kwakadzikama, zvirinani muchikamu chekuvandudza ichi. Isu tinoziva kuti zviwanikwa zvinoshandiswa zvine hukama sezvo iri kuyedzwa kubva kuFlash drive.
Chimiro chake chechiratidzo, sekutaura, Yast, chinosara kubva pandinoona, yakanakisa, yakapusa uye ine simba setup saiti yandakamboedza. Zvese zviri munzvimbo yazvo uye zvakarongedzwa zvakanaka, zvingangoita pasina kurasikirwa uye zvirinani zvakadaro zvinenge zvese mune mashoma mashoma Mhinduro yekushandisa yakanaka kwazvo, zvinotora nguva shoma kuvhura uye inoita zvese nekukurumidza. Chinhu chega chingangoshoropodza Yast ndechekuti, manejimendi ezvinyorwa hazvina kunyatsojekaIni handireve kutaura kuti zvakaoma zvachose, kungoti hazvisi izvo zvakajeka kana zvichienzaniswa nedzimwe sarudzo.
Iyi RC ine KDE vhezheni 4.8.4 saka kugadzikana uye kutaridzika sezvandambotaura, zvinovimbiswa. Iyo ine Amarok semutambi wemimhanzi uye Kaffeine seye multimedia player; Firefox sewebhu browser, pamwe naKmail, Choqok naKtorrent vari chikamu cheboka rewebhu; Mahara hofisi sehofisi suite uye Kontact semaneja wekubata. Kuwedzera kune akawanda mamwe mashandisirwo. Zvisinei, Sarudzo dzese dzeApplications dzinoita sedzakakodzera kumhanya gumi.
Ini ndinonzwisisa kuti ini handisi chinangwa mune iyi micro ongororo, ini handina kunyepedzera kunge ndiri, ingopa "kuravira" kune ino "bvunzo" vhezheni yeimwe yeiyo Kugoverwa kwakanakisa kweiyo GNU / LINUX ecosystem uye kuti dzimwe nguva haina kutaurwa nezvayo zvakanyanya. Pane zvishoma zvasara zveiyo yekupedzisira uye yakagadzikana vhezheni yeOpenSuse 12.2, ini ndichaipawo "bvunzo" zvakare, asi pachokwadi iyi yemumiriri vhezheni inoita zvakanaka kwazvo, handigone kufungidzira yakagadzikana.
Sekupedzisa, ini ndinongofanira kutaura kuti iyi vhezheni vhezheni inoita kwazvo mushe maererano nemashandiro uye hunyoro, kutaridzika kwayo kwakashambidzika kunoitendera kuti izvimise pachayo chaizvo mukati meiyo GNU / LINUX ecosystem; mudziyo wako Yast ichiri chakanakisa kugadzirisa misoro yekugovera kubva pakuisa software kusvika pakuchinja mamwe marongero nenzira iri nyore; kusarudzwa kwezvirongwa zvinofambidzana nekuburitswa zvinoratidza kuti zvinogona kunge zvave kuda kushanda kubva panguva yainoiswa, saka "novice" aigona kuchinjira kwazviri pasina matambudziko makuru; kusimba kwayo kunoita kuti ive Inogona kuita sarudzo kune vazhinji vane ruzivo uye vasina ruzivo vashandisi zvakafanana.
Mamwe ruzivo nezve kuburitswa uku uye zvimwe nezve openSuse pano
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Pfupi kupfuura kuburikidza OpenSuse 12.2 RC2
Zvakanaka sei kugona kuverenga mune ino blog nezve OpenSUSE, kuganhurirwa kugoverwa kana paine chero.Ndangariro yandinochengeta kubva kuOpenSUSE ndiko kusimba kwayo, haina kumbondipa matambudziko kunyangwe ichiwedzera akawanda ekunze marekodhi senge KDE 4.8 .. Zvinokurudzirwa kuti unzwisise zypper uye uzive zvayakanakisa sarudzo.Kana iwe ukawedzera repositori uye uchida kugadzirisa shanduko, iwe unongotaurira zypper kwaunoda kuti ivandudze neyakareruka zypper dup -from [iyo-repo-iwe-yaunoda. ] ... mumaonero angu zypper inobata zororo rekunze zvirinani kupfuura YaST.
Chinhu chine OpenSUSE uye uye mumaonero angu chinopfuura chero nharaunda inhamba yesarudzo yekusanganisa vashandisi kwazviri, zvinongokwana kuti vatendeuke peji ravo kuti vazvione.
Zvakanaka sei kuziva kuti openuse ichiri imwe nzira yakanaka. Makandiita kuti ndirangarire mavambo angu, ayo aivewo muna 2007 nesuse vhezheni 9.3 asi ini ndinorangarira zvakashata uye yekutanga iyo semunhu mutsva wandinogona kushandisa kunze kwebhokisi. Ndichazviedza mune iyi vhezheni itsva kuti ndione kuti sei. Ini ndichagara ndichifarira kuishandisa uye kuti yakandivhurira nzira yekuti ndidzidze zvinhu zvitsva.
yakanaka kwazvo info xD ndapfuura nemazhinji ma distros mugore rimwe chete randiri ne linux 😛 uye parizvino ndine openuse ne kde uye chokwadi ndechekuti handizvidembi nekuchishandisa, yakanyatsogadzikana neakanakisa aesthetics inosanganisira yakawanda zvirinyore kutamira kubazi rayo Tumbleweed (kutenderera) kuti ne debian xD zvirinani ndiyo maonero angu hehehe
Hechino chinyorwa cheangu openuse xD https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459684937395918&set=a.459684757395936.107597.100000632470835&type=3&theater
Ini handina kumboshandisa iro raRolling bazi, chaizvo handizive kuti rinoshanda sei. Asi OpenSuse yakanaka kwazvo Distro, zvekuti hupenyu hwangu ndiDebian kana OpenSuse.
Nechikonzero, Opensuse inorongwa nevanhu vazhinji seyakanakisa KDE distro pamusika. Iwo manejimendi ezvitoro ndeyechokwadi, unogona kuseta yakanaka kana ukabata kwausingafanire. Uye zvakare, ini ndinofungawo zvakafanana newe kuti ndeye ma novice kana nyanzvi. Zviri nyore kusiya zvese serial repos uye usatarise matambudziko ekuwana kugadzikana kunokanganisa kwemazhinji madhiri kana kusanganisa zororo kuita distro kuyera kuonga kune OBS (Opensuse Vaka Sevhisi) uye iyo download.opensuse.org saiti. Muenzaniso ndewekuti kune ichiripo openuseuse 12.1 pane yakagadzikana reposvo yeKDE 4.7, 4.8 uye 4.9, ichibvumira mushandisi kusarudza achiri mune serial distro ibazi rakaomeswa 4.7.2 kune ayo chete mapaki ekuchengetedza.
Chokwadi, vazhinji vashandisi veKDE vanoti iro ruzivo rwevashandisi neiyi distro uye nharaunda inonakidza.
Ini zvakare ndakatanga pane izvi neOpensuse (10.2)!
Nekudaro, parizvino (sekuna Fedora) ini handizive kuti nei ndichiwana madhiragi mairi maviri matatu ... saka ndakarega kuishandisa. Ini ndinorangarira zvakare kuti ndakaiisa palaptop yababa vangu, murume ane makore anodarika makumi matanhatu anoshanda pc padanho re "mushandisi", uye ainyatso gadzikana neiyo KDE vhezheni kusvikira yagadziriswa uye akatadza kutanga komputa (mushure mechiitiko ichi afunga kudzokera kuWindows…).
Saka ndine rudo / ruvengo hukama neOpensuse sezvo kwaive kutanga kwangu paLinux; zvisinei ndakanga ndisina zviitiko zvakanaka kwazvo naye. Chandinofungawo kuti chinocherechedzwa nharaunda iri kumashure kwayo; sezvo iri yakakomba 🙂
Ini ndinoda OpenSuse, sevakawanda yaive imwe yeangu andinofarira distros pandakatanga. Nhasi, kunyangwe ini ndichiri kurodha pasi uye kuyedza yazvino vhezheni mu liveUSB (kungo taura pane zvakaitika), asi handifunge kuti zvichachinja izvozvi kubva mukuparadzaniswa nemafomati eDEB, senge Debian uye zvigadzirwa. Mukuona kwangu, migove yakatorwa kubva kunaDebian iri nyore kushandisa uye ndinovawana vakasununguka pakuisa mafomu. Asi ini ndinoramba ndichiombera basa revanhu paOpenSuse.
Ini ndinobatana mukutenda kwekuona kuti OpenSuse haina kukanganikwa 🙂
Gore nehafu yapfuura ndakaisa vhezheni 11.4, iyo yandakanga ndashamiswa nekushomeka kwayo kusinga pindike, akasiyana maforosheni anoita shuwa kuti haumboshaye chikumbiro chakavandudzwa uye KDE inotarisirwa kune idiki diki.
Mazuva ano [uye mushure mekusagadzikana muMandriva] ndiko kwandinofarira kugovera, uye sezvambotaurwa, kunyangwe ichiuya zvakajairika neKDE 4.7, ini ndakakwanisa kukwidziridza pasina dambudziko kuKDE 4.8, uye munguva pfupi yapfuura kuKDE 4.9. Kuita kwayo uye kugadzikana kwakasarudzika.
Ndiri kutarisira kunotevera 12.2 😛
Zuva raunoshora rakavhurikaSUSE ini ndinodonhedza ngano ;-).
Ini handimbofa ndakamukanganwa… nekuda kwake ini ndakapinda ino inonakidza nyika yeGNU / LINUX.
yakanga iri yechipiri distro yangu ndichienda kuburikidza neLinux. Ndinochida, kunyangwe kekupedzisira pandakaiyedza, handina kukwanisa kumisikidza isina waya kubatana.
Kukundikana kana kushayikwa kwemutyairi pamwe?
zvekutyaira. Ndakaedza muSuse foramu, asi ini ndinofunga ivo havana hunhu kupfuura muDebian forum, hahahaha!
Ini ndinobvumirana zvizere neelendilnarsil yako yekutaura uye ndicho chaive chikonzero nei ndakafunga kushandura OpenSUSE yeFedora, kugovera kunoenzaniswa zvachose, kana kusiri kwakakwirira kupfuura SUSE.Zvakarewo neKDE 4.8.2 Fedora ine rpm inoita zvakafanana mabasa. Uye sekutaurwa kwazvakaitwa pano paSUSE hazvinzwisisike kune mutsva anonzwisisa repositi pekutanga. Pakupedzisira ini ndichataura ndichidzivirira iyo Debian foramu uye nekukuvadza kweSUSE kuti kune ruzivo rwakawanda uye rwakarongedzwa zvakanaka panokwanisika kuwana chinenge zvese.
Kana iwe ukachinja yako distro nekuti hauna kubatwa zvakanaka muforamu ... ndinofunga iwe unonyanya kubatwa ... ndiko kuti, inzvimbo, kwete nzvimbo yekurapa.
Ini ndinofunga kuti esdebian foramu yaitungamirwa neboka revanhu vane hunyanzvi uye vemasekete vanhu ... zvirinani zvainge zvakaita saizvozvo kare kare uye ndosaka ndakarega kushandisa Debian, usaendeko uye ndizvozvo, ndakatora kuzvitarisira uye kudzidza zvakawanda zvakare.
Kune rimwe divi, forumsuse yaitaridzika kwandiri senzvimbo yakanaka, sekutaura.Zviri pachena kuti iwe unofanirwa kuverenga nekuremekedza iyo foramu mitemo uye kunyangwe iwe usina ruzivo rwakanyatsorongeka mukati mehurukuro, unogona kuiwana pane yavo wiki iyo vamwe vanhu vanonyora vashandisi veiyo foramu.
Asi ndiani wawakambotaura naye kumaforamu? xD
Mukudzivirira kweOpenSuse ini ndichati iine zvakare ruzivo rwakatsanangurwa uye nekutsanangurwa nezve zvese zvinhu zvese: http://es.opensuse.org/
Nezve Fedora, zvirokwazvo ndeimwe yekuremekedzwa kupihwa kunze uko, asi chii chinoita kuti ive yepamusoro kune OpenSuse?
Zvakanaka, ndine urombo kusawirirana nemaonero ako. Uye ini handizove iye anodurura chero chakaipa chinokodzera kuenda kuchisangano cheGNU / Linux, kunyangwe zvingaite sezvisingafadze. Nekudaro, chero munhu anoda kuwana iyo yambotaurwa forum uye nekutevera zvimwe zvakatumirwa anozokwanisa kutarisa zvinoreva izvo zvandaratidza. Kune vamwe vese, chero munhu akasununguka kuita sarudzo dzinoita sedzakakodzera. Ndokusaka ndakasiya kugovera kuri kwakanaka kwazvo asi kuti pane dzimwe nyaya zvakandiomera kuti ndinzwisise, kana zvasvika pakubvunza mubvunzo. Kune rimwe divi, iwe unogona kuona kuti handisi ndega ndinofunga nenzira imwechete uyezve ini handitungamirwe nemweya mudiki wekukakavara.
Ndanga ndichitora chikamu muForosuse.org kwegore nehafu, asi ini handina kusangana nehutsinye kana chero chinhu chakadai: S ...
Kufanana neni, ini handina kumhanyira kune vanhu vasina kudzidza zvakanyanya, asi zvikumbiro kana zvikumbiro zvinoitwa nenzira yakaipa.
Zvakanaka, ihama. Mumwe waunodzidza naye akachinja Fedora kuita Opensuse nekuda kwematambudziko emutyairi. Zvinoenderana neruzivo rwemushandisi wega wega.
Ndakaedza OpenSuse kamwe asi ini handina kuifarira XD
Ruremekedzo mafungiro, kwaziso.
Ndakaedza iyi RC kumusoro kumusoro asi neGnome uye muchokwadi kuti yakanyatsobatanidzwa uye yakagadziridzwa, ndinofunga handina kuona distro ine yakanaka yekubatanidzwa seOpenSuse, yakatonyanya nani kupfuura Fedora TT Pamwe ndosaka ichindidaidza kudaro kunyatsoteerera kuburitswa kwake kunotevera: P.
Kuenderera kune chimwe chinhu, uyo anokurudzirwa kuti aite yakanaka posvo paPost-Kuisirwa uye Kugadzirirwa kweOpenSuse, zvitende kana kwete, ndinofanira kureurura kuti ndeimwe yemamwe madhizaini asingatore tambo chaizvo izvo zvatinoti : P.
Kana iwe uine zvishoma zvekutsungirira, ndichazviita ndega pablog rangu, uye ini ndinobatanidza pano
Ndatenda kwazvo hama, ndinenge ndichiona 😉
Zvakatora mazuva mashoma asi heino yakavimbiswa OpenSuse post-yekuisa bhuku. Ndine urombo nekunonoka kwaPerseus, asi ini ndakavimbiswa kuti yaive chikwereti, uye unayo pano: http://filosofialinuxera.blogspot.com/2012/09/guia-de-post-instalacion-de-opensuse.html
Ndinovimba ichakubatsira iwe 😛
Ndatenda zvikuru hama =). Mangwana ndikangowana nguva ndichaiverenga pasina kukundikana.
Uye chaizvo, ndatenda neruzivo 😀
kugovera kukuru pasina kukahadzika… zvakashata ini ndakawana arch iyo yanga iri nani kwandiri
Ivo vari distro nenzira dzakasiyana, saka dzinenge dzisingaenzanisike. Chero hazvo Arch iri inoshamisa Distro. Kwaziso.
Zvakaipa hazvizounze KDE 4.9, kana mushanduro 11.4 vanoisa KDE 4.6.0
Nekudaro, iwe unogona kukwevera yakatarwa repository uye nekuisa KDE 4.9 pasina matambudziko. Ipo KDE 4.9.0 ini ndawana zvimwe zvidiki diki izvo zvichagadziriswa mukuburitswa kweshanduro 4.9.1.
ehe, ini ndinokunda muyedzo uye ini ndakakwidziridza kubva kuKDE 4.7.4 kuenda kuKDE 4.9.0 uye handisati ndacherechedzwa chero ruzivo, senge pandakaisa KDE 4.8 [mushure mekunge ndadzokera ku4.7.4]
Ndakaona zvinhu zvakaita, semuenzaniso, kuti bhaisikopo bha font hairemekedze mhando yefonti yauinayo kana iwe ukashandisa hwindo rekushongedza rakasiyana nechero yeapi anouya nekutadza.
Kana kuti pandinoburitsa midhiya inobviswa (senge dhisiki yekunze kana CD), muDolphin, muKolamu yenzvimbo, chiratidzo chefaira chinosara asi chisina zita, uye hachiwanikwe kana chero chinhu, ingori iyo yakafa icon inogara ipapo.
Sezvauri kuona, hazvisi zvinhu zvinokanganisa basa rako, iwo anongova mamwe eeshongedzo, asi zvikasadaro, zvinofamba mushe.
Ini ndinobvumirana nevamwe vashandisi vakataura nezve kusimba uye kutarisirwa kwekugovera uku ... chikuru pakati pezvakakura. Sezviri pachena anenge munhu wese anga ave kuburikidza neSuse / OpenSuse pane imwe nguva muhupenyu hwedu. Kumirira yekupedzisira vhezheni yechikamu chitsva ichi kuti unyatsoyedza.
Inoverengwa mushe, ndichaedza kuyedza.
Shinga, zvakanakisa. Mirira iyo yakagadzika vhezheni iri kuda kuona mwenje.
Inotaridzika zvakanaka kwazvo, ndiyo yega distro isingaburitse yakasanganiswa manzwi ne KDE (hapana kukanganisa kune chero munhu, nekuti vamwe chero chinhu chinosvetuka), ndakachishandisa kweinopfuura gore uye chakashanda chaizvo. Ndaizvida, asi ndakasuwa Ubuntu uye ndaifanira kudzokera kumashure. Ini ndinofunga kuti panogadzikana vhezheni ndichaiisa 🙂
Uraya maitiro neumwe kuraira